Booliska oo loo fasaxayo akhrisashada emailada | Somaliska
Televishinka Sweden ayaa soo tabiyay in Booliska Sweden loo fasaxayo in ay akhristaan emailada dadku ay isku diraan iyo in ay dhagaystaan telefoonada ayagoo sidoo kale heli doona ogolaansho ay kula socon karaan warbixinada kale ee internetka laysugu diro. SVT ayaa sheegtay in 6 ka mid ah sideeda xisbi ee ku jira baarlamaanka ay isku raaceen in arintaan la dhaqan galiyo waxaa keliya oo ka soo horjeestay xisbiga Bidixda iyo Xisbiga Deegaanka. Arintaan ayaa la sheegay in la soo bandhigay ka dib qaraxii lala eegtay Stockholm bishii December ee sanadkii tagay.
Booliska oo loo fasaxayo akhrisashada emailada
Televishinka Sweden ayaa soo tabiyay in Booliska Sweden loo fasaxayo in ay akhristaan emailada dadku ay isku diraan iyo in ay dhagaystaan telefoonada ayagoo sidoo kale heli doona ogolaansho ay kula socon karaan warbixinada kale ee internetka laysugu diro.
SVT ayaa sheegtay in 6 ka mid ah sideeda xisbi ee ku jira baarlamaanka ay isku raaceen in arintaan la dhaqan galiyo waxaa keliya oo ka soo horjeestay xisbiga Bidixda iyo Xisbiga Deegaanka.
Arintaan ayaa la sheegay in la soo bandhigay ka dib qaraxii lala eegtay Stockholm bishii December ee sanadkii tagay.